Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlay Maleeshiyaad Argagixiso ah oo Muqdisho lagu toogtay – Radio Muqdisho
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlay Maleeshiyaad Argagixiso ah oo Muqdisho lagu toogtay
Ciidammada amniga ayaa magaalada Muqdisho ku toogtey maleeshiyaad hubeysan oo Baabuurta ka dhex disha dad aan waxba galabsan, sida uu sheegay Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Mudane Daahir Maxamuud Geele.
Mudane Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in haayo cadaymo muujinaya in maleeshiyadaan ay ka danbeeyeen dilkii Muqdisho loogu gaysta Allaha u naxariistee Maxamed Maxmuud Sheekh oo ka mid ahaa dhalinyarada firfircoon ee magaalada Muqdisho.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa dhanka kale tilmaamay in ciidanka ammaanka haatan gacanta ay ku haayaan Gaari ay wateen maleeshiyaadkaan iyo Hubkii ay dadka ku dilayeen.
Mudane Daahir Maxamuud Geele ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay falkii foosha xumaa ee Maleeshiyada Argagixisada ah ee Al-Shabaab ay Masaajid ku yaala degmada Xamar Jajab ay ku dhex dileen qof salaad ku jiray oo dukanayay, wuxuuna ku tilmaamay in falkaasi uu muujininayo sida maleeshiyadaan ay uga been sheegayso diinta islaamka.
Kaaliye ka tirsan Maxkamadda gobolka Banaadir oo loo xiray eedeyn ku aadan lacago Laaluush ah